Forum serasera malagasy Teny Frantsay nagasina (manamerde, misentimaka, misousy, nochargeko, ...) - Dinika forum.serasera.org
Teny Frantsay nagasina (manamerde, misentimaka, misousy, nochargeko, ...)
Fitohizan'ny hafatra : Teny Frantsay nagasina (manamerde, misentimaka, misousy, nochargeko, ...)
tojonjanahary - 09/07/2015 09:53
TS tokony ionona @ zay ve tsika malagasy hoe ny teny gasy dia misy teny frantsay koa satria tsy ho afaka ao @ malagasy Tsun manjakizay le Français . Sady le teny gasy pure sady lavabe no tsy ampy ny voambolana.
De mba mirehareha @zay tsika oe ny origine ny teny gasy dia avy @ reto: langue malais, jiosy, bantoue, indonésie, arabo ary farany ndrindra "FRANCAIS".
5laody - 10/07/2015 17:03
Sady le teny gasy pure
izao ve dia mba rariny?
mpisotrtoaka - 03/08/2015 16:17
Mirediredy ndray a !
Radavison - 08/09/2015 12:12
manamerde = mandreraka, manorisory, maniry kiry
misentimaka = mitsetra
Nav - 06/10/2015 09:11
Sendra mandalo dia mamaly na milaza hevitra.
Ity moa fifanakalozan-kevitra ka hanomezana torolalana ihany ho antsika malagasy manoratra amin'ny teny malagasy (aza heverina hoe havanana dia havanana amin'ny teny malagasy aho fa ny ahy dia teny malagasy fampiasan'ny siantista sy injeniera no ataoko eto, tsotra ary mazava, tsy be haingonkaingony).
Efa nisy vahaolana voalaza eo ambony ary ho an'ireny mpiteny safiotra ireny dia miezaha kely fotsiny ianareo mieritreritra sy manontany raha misy teny malagasy mahadika an'ireny voanteny mety mahazatra anareo ireny, misy tokoa fa miezaha mafy ary hohitanreo ny fahombiazana.
Ilay voalaza ery ambony moa ny hoe hionona isika fa efa be teny vahiny dia tsy marina ny voalazanao amin'ireo statistika nomenao ireo: teny bantou: vitsy, teny arabo: vitsy koa, teny malais/indonezianna: ny fototeny no itoviana maro? teny frantsay: tsy maro araky ny voalazanao, efa misy nogasiana ary raikitra eken'ny besinimaro, raha vao tsy eken'ny besinimaro dia teny manokana an'olom-bitsy izany ka tsy azo raiketina ho fitsipika.
Ny azoko lazaina dia efa misy ezaka ankehitriny hanatsaràna io teny malagasy amin'ny sehatra 2 lehibe dia: i) Ny Fomba fanisana malagasy ary ii) Ny Abidia malagasy.
Mila porofo ve ianao? Raha mandefa/mampiditra telefonna dia AZO ATAO AMIN'NY TENY MALAGASY MADIO tsy ampiasana teny frantsay mihitsy.
Ohatra:tel 034 06 1234 56. Ampidirina toy izao: Zero Telo Efatra Zero Enina Iray Roa Telo Efatra Dimy Enina. Vokany: tonga dia lasa ny antsonao, mahomby ny paika.
vahiny2004 - 16/10/2015 15:20
Nisy panneau hitako izay, feno ny dikan'ny hoe : PAIX @ teny maro, ny antsika irery no misy litera 16 : FANDRIAMPAHALENA
endriny - 16/10/2015 17:39
Tsara aloha rehefa mahay mionona e.
Dia aleo mihintsy ovaina hoe France Paradis I Madagasikara amin'izay mba mirindrarindra sy mientoento tsara...
Nav - 17/10/2015 21:35
Inona moa izany mionona izany? Angaha voanteny vitsy no anaovana ohatra dia ilazana fa ratsy ny teny malagasy satria hoe "lavabe"? na "tsy ampy voambolana"?
Jereo any ifotony ka raha misy kilema dia ahitsio, izany hoe tsy ianao irery fa isika Malagasy rehetra no manitsy, ity moa dia amin'ny alalan'ny Fanjakana mihitsy.
Ny ahy averiko eto ny fandinihako ity teny malagasy ity, mamerina in-droa manana ny antitra hoy ny fiteny: manana kilema 2 lehibe ny teny malagasy dia:
i) Tsy fahampian'ny voambolana eo amin'ny sehatra siantifika sy teknika. Vahaolana amin'io: atsarao ny Abidia malagasy ahafahana manampy sy manatsara ireo voambolana tsy ampy. Efa nanolotra vahaolana aho ary efa nolazaiko teto amin'iy kianja ity sy tamin'ny toeran-kafa koa. Raha tsy misy manohitra moa io vahaolana narosoko io dia marim-pototra iz:any: ny fanatanterahana azy sisa atao. Dingana hafa izany.
ii) Ny fomba fanisana malagasy tokony harenina. Efa nanome vahaolana koa aho. Iry ambony mikasika ny N° tel no santionany. Vahaolana azo antoka koa io, efa voaporofo, tsy azo toherina fa marina eo amin'ny endrika matematika.
Fanampi-panazavana ho anareo izay mety mbola misalasala: Madio dia madio ary mahomby 100% io Fomba fanisana malagasy narenina io. Fampitahana: tsara noho ny fomba fanisana frantsay io Fomba fanisana malagasy io, tsy fantatrareo angaha fa misy diso vitsivitsy ny fomba fanisana frantsay? Maninona no miteny hoe : 80: Quatre vingts? DISO eo amin'ny matematika io, santionany io fa mbola misy hafa ny diso amin'ny fanisana frantsay.
Fehiny: tsy tokony ho kivy ny Malagasy fa azo atsaraina daholo ireo kilema 2 ireo.
endriny - 19/10/2015 06:28
Ny tena olana amin'ny Malagasy dia tsy ilay hoe tenigasy lavabe na hoe tsy ampy voambolana. Fa io izany ilay tsy fitiavana ny an'ny tena mihintsy sy ilay tsy fananana hazon-damosina e. Dia aleo miteny hoe ny tenifrantsay mahalaza ny zavatra rehetra fa ny tenigasy tsy ampy.
Dia aleo ary ataoko hoe lava ny tenigasy. Dia ahoana ny tenialemanina, Maninona ry zareo ao Jerimany no tsy mikotaba amin'ny halavan'ny voambolana ao aminy na ny teny?
Pomme de terre mira ovy amin'ny tenigasy fohikely hihihihi
Atao hoe tsy ampy indray ny tenigasy: ka raha zavatra tsy niforona teto kosa ve moa dia ahoana no ananantsika voambolana mikasika izany; Fa ny bus ohatra tokony atao hoe bosy dia vita... io ohatran'ny hoe I Jean dia andeha hitady dikany hoe zavoto mihaja ve isika... hihihihih
Fa adalan'izay tsy manaja ny azy, ary aza gaga raha ambanian'ny frantsay... "mibadabada mireny frantsay sy mirrrrr be hono kanefa maizina" Fomba fitenin'ny frantsay mahita ireto afrikanina te ho vazaha io...
201007jacky - 30/09/2016 09:32
Diso izay milaza fa tsy ampy voambolana ny teny malagasy. Tena ampy voambolana tokoa isika Malagasy fa noho ny tsy fahafehezana azy, noho ny tsy fanajana azy no mahatonga antsika hinia hampiasa teny vahiny.
Nav - 02/10/2016 12:30
Miarahaba anareo rehetra indray fa efa ela izay no nandalo teto ami'ny Serasera momba ity teny malagasy ity.
Ho antsika rehetra, jereo daholo ireo lahatsoratra avy amin'ny mpisera maro teto fa efa ao daholo (araky ny fijeriko) ny ankamaroan'ny vahaolana momba ity teny malagasy ity. Ny olana lehibe indrindra dia tsy mikasika ny tena votoatin'ny teny malagasy fa mikasika ny finiavana na tsy finiavana avy amin'ny Fitondram-panjakana hanao na tsy hanao.
Araky ny fijeriko dia olana politika no misy amin'ireo mpitondra fanjakana nifanesy: ireo mino ny maha Malagasy azy ka miaro ny soatoavina sy kolontsaina malagasy (ary ao anatiny indrindra ny TENY MALAGASY) dia vonona ny hanatantareka izay vahaolana aroson'ireo manampahaizana malagasy.
Ireo tsy miaro ny maha malagasy azy fa mivoy ny baiko nampidirin'ny vahiny ka manosihosy izay endrika maha Malagasy (ary manosihosy ny TENY MALAGASY) dia, mazava ho azy tsy hiaro an'io Teny malagasy io.
Ny zava-misy aloha dia fantatra tsara ary fantatrareo rehetra: tao anatin'izay 56 taonan'ny fahaleovantena izay dia ny mpanohitra ny kolontsaina sy soatoavina malagasy no nitondra teo: porofo? Jereo ny Lalampanorenana farany 2010 izay milaza fa : ny teny malagasy sy ny teny frantsay no teny ofisialy. Fantatrareo tsara fa rehefa izany dia manitsaka ny teny malagasy no ataon'ny Fitondram-panjakana.
Aza mihodinkodina miala bala ianareo rehetra izay tao anatin'ny Fitondram-panjakana malagasy nandritra izay fotoana lava 56 taona izay fa tompon'andraikitra amin'ny vokatra misy ankehitriny.
Inona no vahaolana? Olana politika: mitady vahaolana politika.